သိသလိုလိုဖြစ်နေတဲ့ HIV/AIDS အကြောင်း (Part-A) | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Society & Lifestyle » သိသလိုလိုဖြစ်နေတဲ့ HIV/AIDS အကြောင်း (Part-A)
သိသလိုလိုဖြစ်နေတဲ့ HIV/AIDS အကြောင်း (Part-A)
Posted by Nyein on Nov 12, 2010 in Society & Lifestyle | 10 comments
ဒီအကြောင်းလေးကို စရေးဖြစ်လိုက်တဲ့အကြောင်းလေးက ဒီနေ့မနက်မှာစလိုက်တာပါ။ တကယ်တော့ကိုယ်သိထားတဲ့ HIV/AIDS အကြောင်း ရေးချင်နေခဲ့တာ တော်တော်လေးကြာပါပြီ။(သိလွန်းလှတယ်လည်း ကိုယ့်ကိုကိုယ် မဆိုလိုပါဘူး) အခုဒီ Post လေးကလည်း ကျွန်မသိလိုက်ရတာလေးကို Share လုပ်ရုံသက်သက်ပါ။
ကျွန်မ လူတော်တော်များများကိုHIV/AIDS အကြောင်းမေးခဲ့ဖူးပါတယ်….(မေးရတဲ့အကြောင်းက..ကျွန်မကိုယ်တိုင်လည်း စိတ်ဝင်စားတယ်…ပြီးတော့အဲဒီလူတွေအတွက်ဘာ တွေလုပ်လို့ရလည်း….လုပ်နိုင်သေးလဲ…သူတို့တွေအတွက်ဘယ်အရာတွေဟာအရေးကြီးလဲ…စသည်ဖြင့်ပေါ့)
ကျွန်မတို့လိုလူငယ်တွေထဲမှာ ဒီအကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီး သိပ်လက်မခံချင်သေးတဲ့လူတွေရှိနေသေးတာဟာ ယနေ့ခေတ် လူငယ်တစ်ယောက်အနေနဲ့ စိတ်မကောင်းစရာလို့မြင်မိပါတယ်။(စာရေးသူ၏အမြင်သက်သက်သာ)
ဒီနေ့မနက် ကျွန်မနဲ့ရင်းနှီးတဲ့ သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်က..သူတို့ Donation တစ်ခုသွားချင်တယ်…နေရာရှိရင်ပြောပါအုံးဆိုတာနဲ့ ကျွန်မကလည်း မ/ဒဂုံဘက်မှာ HIV/AIDS မိဘမဲ့ကလေးတွေကိုထားတဲ့ မိဘမဲ့ ကျောင်းတစ်ကျောင်းတော့ရှိတယ်…လောလောဆယ်မှာလည်း အလှုရှင်လိုအပ်နေတယ်လို့ပြောလိုက်တော့…သူကပြန်ပြောပါတယ်….
(ဟင်…အဲဒီကျောင်းကြီးလားတဲ့….ဒါဆိုရင်တော့မသွားချင်ပါဘူးတဲ့…အဖွဲ့ထဲကလူတွေကလည်းသွားချင်ကြမှာ မဟုတ်ဘူးတဲ့..ကျွန်မကဘာလို့လဲဆိုတော့….အဲဒီ HIV ပိုးရှိတဲ့လူ စကားပြောလိုက်လို့ရှိရင် သူ့ပါးစပ်ကထွက်လာတဲ့လေထဲမှာ ပိုးတွေပါလာတာတဲ့…ပြီးတော့အဲဒီပိုးတွေကလည်း အမြင့်ပေ 15 ပေလောက်ထိခုန်တယ်တဲ့…ဒါကြောင့်သူတို့ကြောက်ကြတယ်တဲ့လေ…)
ကျွန်မအရမ်းဝမ်းနည်းသွားမိတယ်…..တကယ်ဆိုသူကိုယ်တိုင်လည်းခေတ်ပညာတတ်တစ်ယောက်ပါ..တတ်တာမှ ဘာသာစကားကျွမ်းကျင်မှုရောရှိတာပါ….ဒီခေတ်လူငယ်ပညာတတ်တစ်ယောက်အနေနဲ့ ဒါဟာမှားယွင်းတဲ့အယူဝါဒ တစ်ခုလို့ဘဲမြင်မိတယ်။ ကျွန်မသူ့ကို တစ်ခွန်းတော့ ပြန်ပြောလိုက်မိတယ် …. ဒါဆိုရင်တော့မရေ…ရန်ကုန်မှာတော်တော်လေးကိုရောဂါတွေ ပျံ့နှံ့နေပြီလို့။ကျွန်မသူ့ကိုိအသေးစိတ် ဘာမှပြန်မပြောလိုက်ပါဘူး…ဘာလို့လဲဆိုတောု့ သူကကျွန်မထက် အသက်အရွယ်အရရော….ရာထူးအရရော ပိုမြင့်နေတယ်လေ….တော်ကြာ ကျွန်မက စေတနာနဲ့ပြောလိုက်ပေမယ့် သူ့ကိုဆရာကြီးလုပ်တာလားဆိုပြီး Psycho; ၀င်သွားမှဖြင့် ဆက်ဆံရေးမှာ အဖုအထစ်တွေ ဖြစ်သွားမှာ(အလုပ်ကတူတူဆိုတော့ဒါကလည်းလိုသေးတယ်)။ဒါပေမယ့်အတွင်းစိတ်ထဲမှာတော့ သူ့ကိုကျွန်မသိထားတာတွေကို အသေးစိတ်ပြောပြချင်နေမိတယ်……
အဲဒီရဲ့နောက်ဆက်တွဲကျွန်မ စဉ်းစားလိုက်မိတာက ……………….
အဲဒီလိုမျိုး နောက်ထက်လူဦးရေဘယ်လောက်များ ရှိနေပြီလဲ………………
ဒီလိုရှိနေတာတွေကို ကျွန်မတို့လိုခေတ်ပညာတတ် လူငယ်တွေက တဖြည်းဖြည်းနည်းလာ အောင်ဘယ်လိုတွေ လုပ်သင့်လဲ…………
ဒီ Post ကိုဖတ်ဖြစ်ခဲ့ရင်လည်း HIV/AIDS နဲ့ ပတ်သက်ပြီးစာဖတ်သူတို့ရဲ့အမြင်၊ သိရှိထားတဲ့ဗဟုသုတလေးတွေကိုလည်း ဝေမျှခဲ့စေချင်ပါသည်။
စာကြွင်း။ ။ ဒီPost သည်စာရေးသူ၏ ကိုယ်ပိုင်အမြင်သက်သက်ဖြင့်သာရေးသားထားခြင်းဖြစ်ပြီး မည်သူတစ်ဦးတစ်ယောက်ကိုမျှ ရည်ရွယ်ခြင်းမျိုးမရှိပါ။
Pwint Phyo Nyein has written 1 post in this Website..
View all posts by Nyein →
ဒီလိုလူတွေ အများကြီးရှိသေးတယ် ဆိုတာ အထူးသဖြင့် တွေးကြောက်နေတဲ့လူတွေမှာ ပိုများပါတယ် ..
လူငယ်တွေအတွက်တော့ .. သက်ရွယ်ဆင့်တူ ပညာပေးလုပ်ငန်း ဆိုတဲ့ လုပ်ငန်းလေး ရှိနေတယ် .. ဒီလုပ်ငန်းရဲ့ သဘောအရ အသက် အရွယ် အဆင့် တူမှ ပြောလို့ ကောင်းတာ .. ဒီတော့ သူ့ကို ပြောနိုင်ဖို့ .. သူနဲ့ အဆင့်တူ ဒါမှ မဟုတ် သူ့အထက်က ပြောရင် ရနိုင်ပါတယ် .. ဒါမှမဟုတ် ဆရာဝန် တစ်ယောက်ယောက်ကိုများ ခေါ်ပြီး အဲဒီအဖွဲ့အစည်းအတွက် ဆွေးနွေးပွဲလေး လုပ်ဖြစ်ရင် ကောင်းသွားနိုင်တယ် ..
တပည့်တယောက် နိုင်ငံခြားပညာသင်အရွေးခံရတာ ဆေးစစ်တော့ reactive ဖြစ်နေတယ်။
အခုအချိန်မှတော့ How? why?တွေထက် ဘယ်လိုရင်ဆိုင်သင့်သလဲဆိုတဲ့ ဥစ္စာက အရေးကြီးပါတယ်။
လူသားတိုင်း သတိထားရမယ့် ရောဂါပါ။
သံသယ ရှိပါက စစ်ဆေးကြည့်သင့်ပါတယ်။
ဖြစ်လာရင်လည်း NGOs တွေရှိပါတယ်။
ရန်ကုန်မှာတော့ သဇင်ဆေးခန်း(လှိုင်သာယာ) နဲ့
MDM-ph: ၀၁- 662604 ကိုဆက်သွယ်ကြည့်ပါနော်။
အာရောဂျံ ပရမံ လာဘံ။
ကျွန်မတို့ရုံးမှာတော့ ပညာပေးသင်တန်းလာလုပ်သွားသေးတယ် .. NGO က ထင်တာပဲ .. သူတို့က လူဦးရေ နဲနဲချင်းကို သင်တန်းပေးတယ် … အရာရှိအားလုံး မဖြစ်မနေတက်ရပြီး ကျန်တဲ့ ရုံးဝန်ထမ်းတွေကို ပြန်ပြီးပညာပေးပါလို့ပြောတယ် … ဒါပေမယ့် အမှုမဲ့အမှတ်မဲ့နဲ့ သေချာပြန်ပြီး ပညာမပေးမိဘူး …
Aunti Moe ပြောတာကို ကျွန်မလုံးဝသဘောတူပါတယ်……ပြီးတော့ ကျေးဇူးလည်းတင်ပါတယ်…. မဝေေ၀ပြောတာလည်း ဟုတ်တယ်..ဘာလိုလဲ့ဆိုတော့ အဲဒီလိုသင်တန်းတွေလာပေးသွားတာက အရာရှိတွေ ကို ….သူတို့ကလည်းပြန်ပြီး Share မလုပ်တော့ အဲဒီမှာတင် GAP တွေ ဖြစ်ကုန်ပြန်ရော…….ကျွန်မပြောချင်တာတွေကိုတော့ Post တွေထပ်ရေးပြီးပြောပါ့မယ်……..အားလုံးကို ကျေးဇူးပါရှင်။
ဒီကိစ္စနဲ့ပါတ်သက်တဲ့ ဗဟုသုတ၊ ကာကွယ်နည်းတွေ အသေးစိတ် တင်ပြရေးသားတဲ့စာအုပ်မျိုးတွေ လိုအပ်ပါတယ်။
ပညာတတ်တွေ ၊ကျမ္မာရေး ဗဟုသုတ ၇ှိသူ သော်မှ ဒီကိစ္စ တကယ်၁၀၀% မသိနိုင်တာတော့ ၀န်ခံပါရစေ။
ကျနော်တို့သိတာက အကြမ်းဖျဉ်းလောက် ဘဲဆိုတော့ ဘ၀ကြီးတစ်ခုလုံးအတွက် အရေးပါတဲ့ ဒီရောဂါ ကို တခါတလေကြတော့ ပညာ၊ဗဟုသုတရှိပေမဲ့ အတွေးခေါင်စွာ ကြောက်မိတာတော့ အမှန်ပါ။
ကျနော် ဘယ်လောက်ကြောက်လဲဆို ကျနော့ G/F က ဆေးစစ်ပြီး Negative တောင်မှ အစွပ်သုံးလို့ ကျနော့်ကို စိတ်ဆိုးပါတယ်။
တကယ်ဆို HIV EFFECT က သုံးလပြီးမှ သိရတာမို့လား။
ကိုယောဟန်ရယ် လက်စွပ်ဆိုတာမျိုးက ၂လ ၃လနဲ့မဆိုင်ပါဘူး။ စေ့စပ်လို့ပဲဖြစ်ဖြစ် လက်ဆောင်ပေးလို့ပဲဖြစ်ဖြစ် အမြဲဝတ်ထားရတာကလား။ အဘကြောင်ကြီး ခေတ်မမှီတော့လို့ မှားရင်လည်းပြင်ပေးပါကွယ်။ စိတ်မဆိုးပါဘူး။
ကို ရောဟန်ပြောသွားတဲ့ HIV Effect က သုံးလပြီးမှသိရတယ်ဆိုတာက ဟုတ်လို့လားဟင်……ကျွန်မသိထားတာကျတော့ အဲဒါက ၆ လ (Window Period ) ကျော်မှသိရတယ်ဆို။
သိသူများရှိရင် အတည်ပြုပေးကြပါ အုံးနော်…….
ကိုယောဟန် ရေးထားတာက အိတ်ခ်ျအိုင်ဗီ ပေါ်ဦးခါစက သတ်မှတ်ချက် (၃)လ
နိုနို သိထားတာက အခုပြောင်းလဲသတ်မှတ်လိုက်တဲ့ အချက် (၆) လ
သေချာအောင်လို့ နည်းနည်း နောက်ဆုတ်ထားတာလို့ ပြောရင် ရတယ် .. နောက်ပိုင်းမှာ (၃)လနဲ့ မပေါ်ခဲ့ပေမယ့် (၆)လ လောက်မှာ ပေါ်လာတဲ့အတွက် ကြားကာလကို (၆)လလို့ သတ်မှတ်လိုက်ပါပြီ .. ဒါတောင် နောက်ထပ် အန္တရာယ်ရှိတဲ့ အပြုအမူ ထပ်မလုပ်ဖို့ အရေးကြီးတယ် ..
ကိုကြောင်ကြီးရေ ခင်ဗျားစေ့စပ်တော့မှဘဲ အဲဒီအစွပ်ကိုသာမချွတ်တမ်းစွပ်ထားပေတော့ဗျာ..
ဒါနဲ့ ကာကွယ်ဖို့ အစွပ်သုံးရင်ရော ၁၀၀% စိတ်ချရမလားဟင်..